बाघ बाँचे जोगिन्छ वन - NewsNepal HD
By न्युजनेपाल एच.डी	 On १४ श्रावण २०७८, बिहीबार १३:३८
काठमाडौँ — १४ श्रावण २०७८
काठमाडौँ, बाघलाई ‘अम्ब्रेला स्पेसिज’ मान्छन् संरक्षणकर्मी । जहाँ बाघ हुन्छन्, त्यहाँ वन हुन्छ, उसका आहारा प्रजातिका घाँस खाने जनावर हुन्छन् । ती बाँच्न पानी र घाँस चाहिन्छ । र, जहाँ हुन्छन्, त्यहाँ जैविक विविधता हुन्छ । त्यसैले बाघ बाँचे छाताजसरी सुरक्षा हुन्छ, वन्य जीवन जोगिन्छ भन्छन् विज्ञहरू । तर, बाघले मान्छेलाई बाँकी राख्छ ? बाघले किन लिइरहेको छ त मान्छेको ज्यान ? ‘बाघले सितिमिति मान्छेलाई आक्रमण गर्दैन ।
बाघ बढेका क्षेत्रमा भने नयाँ समस्या छन् । मान्छेलाई बाघ र बाघलाई मान्छेबाट जोगाउने व्यवस्थापन जटिल भएको छ । बर्दिया निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बाघको आक्रमणबाट ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । आर्थिक वर्ष ७७/७८ मा त्यो संख्या ठ्याक्कै दोब्बर अर्थात् १२ जनाको ज्यान गयो । त्यसअघिका वर्षमा यति ठूलो संख्यामा घटना भएको थिएन । बर्दियामा साउन पहिलो साता बाघको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । करिब दुई वर्षमा बर्दियामा १९ जना र सँगै जोडिएको बाँके निकुञ्जमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । गत आव ०७७/७८ मा चितवन निकुञ्जमा भने बाघ र गैंडाको आक्रमणमा मारिएकाको संख्या ५/५ छ । आव ०७६/७७ मा भने बाघ र गैंडासहितका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट निकुञ्जभित्र र ८ जना मारिएका छन् ।बाघसहितका वन्यजन्तुको आक्रमण बढेपछि सरकारले त्यस्ता वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण गरेर राख्ने रेस्क्यु केन्द्र बनाउन जोड दिएको छ । इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यका अनुसार चितवनको देवनगर, बर्दियाको रम्भापुर, पोखरा र भक्तपुरमा आक्रमण गर्न पल्किएका वन्यजन्तु राख्न रेस्क्यु केन्द्र बनिरहेका छन् ।
आक्रमणका घटना बढ्दा निकुञ्जले बाघ नियन्त्रणमा लिने र त्यस्तालाई अनुगमन गर्न घाँटीमा स्याटेलाइट कलर जडान गर्ने गरेको छ । सामान्यतः दुई पटकभन्दा बढी मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई समस्याग्रस्त रूपमा लिने गरिन्छ । अर्का बाघविज्ञ चिरञ्जीवी पोखरेल प्रविधिको विकासले समस्याग्रस्त बाघको पहिचान गर्न र उसको मुभमेन्ट हेर्न सहज भएको बताउँछन् ।अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार एउटा भाले बाघको विचरण क्षेत्रमा सरदर तीनवटा बघिनी हुन्छन् । एउटै बासस्थानमा भालेले अर्को भालेको उपस्थिति रुचाउँदैन । एउटा वयस्क बघिनीले २–२ वर्षमा एकपटकमा २ देखि ३ वटा डमरु जन्माउँछ । ३ देखि ४ वर्षको भएपछि बघिनी प्रजननयोग्य हुन्छन् ।